जनमत सर्वेक्षण–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लगभग ९ महिने कार्यकाललाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? — SuchanaKendra.Com
जनमत सर्वेक्षण–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लगभग ९ महिने कार्यकाललाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
काठमाण्डौं । माओवादी केन्द्रको सर्मथनमा सरकार चलाएका नेपाली कांग्रेसका सभापती तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा आजको मितिबाट सरकारलाई छाडी पार्टी राजनितीमा फर्किएका छन् । स्थानिय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन सहित संघिय चुनावको पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव गराएका देउवा सरकार छाड्दा पनि आलोचित भैरहेका छन् ।
निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सर्मनाक पराजय पछि पनि सरकार छाड्न आनाकानी गरेको, राज्यकोषमा बश्मलुट गरेको, आफ्ना नाता गोता तथा पार्टीका आफ्नै गुटका मानिसहरुलाई मात्रै हेरेको र अन्यको कुनै वास्ता नगरेको कारण आलोचनाको शिखरमा रहे । श्रीमतीको कारण पनि आलोचनामा रहेका देउवाले सरकार छाड्दै गर्दा उनी प्रति आम धारणा बुझ्नको लागि हामी मत सभ्रेक्षण गरेका छौं । तपाईले आफ्नो धारण राख्न सक्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लगभग ९ महिने कार्यकाललाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?